Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ayaa joojisay CIyaarihii lagu qaban jiray Garoonka Kubadda Cagta ee Koonis. – STAR FM SOMALIA
Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Federalka Somaliya, ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in la joojiyay CIyaarihii lagu qaban jiray Garoonka Kubadda Cagta ee Koonis.
Wasiir ku xigeenka Wasaarada Dhalinyarada iyo Isboortiga Xukuumadda Federalka Somaliya Cismaan Aadan Dhuuboow, ayaa sheegay in amarkaan uu yahay mid ka soo baxay Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha, islamarkaana muddo aanan la cayimin Ciyaaraha Garoonka hakad la geliyay.
“Inaan hakinay Ciyaarihii lagu qaban jiray Garoonka Stadio Koonis waa go’aan Wasaaradeed ah muddo aanan la cayimin waxaan sababeynaa Shaqsiyaadka gaarka ah ee xiriirka ee Garoonkaasi howlihiisa inay ka dhaga adeegeen awaamiirta Wasaarada iyo in Boonooyin Suuq madoow ah laso daabaco oo Wasaarada aysan wax kala socon.” Ayuu yiri Wasiir Dhuuboow.
Arinta ugu weyn ee keentay in hakadka la geliyo Ciyaaraha Garoonka ayuu sheegay inay tahay Dhaqaalaha ka soo baxa Garoonka inay Shaqsiyaad gaar ah qaataan, taasi oo aysan waxba kala socon Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha iyo sidoo kale Wasaarada Maaliyada.
Amarkaan ka soo baxay Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Federalka Somaliya ayaa noqonayaa kii ugu horeeyay ee si toos ah loogu joojiyay Ciyaaraha Kubadda Cagta Stadio Koonis oo dhalinyaro badan ay aad u xiiseeyaan.
Xiriirka Kubadda Cagta Somaliya ayaanan weli ka jawaabin hadalkaan ka soo baxay Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Somaliya.